Waterpark e Marino itholakala ensimini ka enye yezindawo ezinkulu kakhulu eziyinxanxathela, alinikela izivakashi ezihlukahlukene okubanzi ukuzijabulisa for wonke akuthandayo. Ukuvulwa omkhulu eziyinkimbinkimbi kwenziwa ngo-2003, futhi wengamela ukwakhiwa soMthetho woHulumeni eMoscow. Kusukela ngaleso sikhathi le ndawo wathola udumo omkhulu phakathi kwabakhileyo nezindawo ezizungezile. Ngaphandle ihaba, singasho ukuthi lena ethandwa kakhulu nabadumile amanzi ipaki eMoscow. Marino, ogama izakhamuzi izivakashi eyinhloko eyinkimbinkimbi, sekulula kakhulu futhi kukhanga ngokwengeziwe ziphile obhekwe maphakathi ezokungcebeleka kanye ukuzijabulisa.
Izici Water Park
Waterpark e Marino - nendawo enkulu sokuzilibazisa wonke umndeni. Lapha ungakwazi nijabula futhi evusa inkanuko ubambe lokuzalwa, umcimbi kwengane yenkampani noma inkampani umfundi. Isakhiwo ine Animators yayo kanye abagqugquzeli ukusiza ucabangisise kahle ngezinselele iskripthi iholide futhi yazise imibono umhlabeleli iyiphi inkampani. Ngokuphathelene nokuphepha kwezingane zabo, abazali bangaqiniseka lula, ngoba kukhona othisha abanekhono baqikelele induduzo izivakashi encane.
Le ndawo ingqikithi epaki amanzi kuhlanganisa izindawo okuhlalwa eziningana, ngayinye yaba lwabelwe ukubhalisa okhethekile. Ngokwesibonelo, epaki amanzi e Marino inikeza izivakashi ukuvakashelwa njengoba amazwekazi: Afrika, i-Antarctica, Melika. Futhi itholakala esizeni njalo Animators ukusebenza futhi abatakuli, abaphethe fun nokuphepha kwezivakashi.
Waterpark e Marino ifakwe imishini yesimanje izinga. Isethi eyinkimbinkimbi amaslayidi 5 eziphakeme ezahlukene, ngalinye elikwazi ifakwe yonke imithetho yokuphepha. Amaslayidi ihlukaniswa ngokweminyaka degree of extremality, ngakho njalo isivakashi ungathola okuthile okujabulisayo ukunambitha.
Waterpark e Marino has a wave pool ekhethekile lapho izivakashi kungaba sengathi izimo ulwandle cishe evulekile. Lapho ungakwazi ubhuquze noma uthanda zemidlalo zimatasa ngaso.
Kubathandi iholide okuphumuzayo Marino Waterpark inikeza uhlu olubanzi amasevisi, okuhlanganisa ezihlukahlukene izinhlelo spa. Lesi siqiwu amanzi etholakala okugeza kanye sauna, ukusiza rejuvenate umzimba futhi uvuselele ingqondo nomzimba.
Ngokungangabazeki, elinye lamathuba angcono kakhulu imibono original ukungcebeleka ngezimpelasonto - uhambo oluya epaki amanzi e Marino. Intengo Ticket luyehluka kuye isikhathi sosuku kanye usuku lwesonto. Izindleko ithikithi ingane iqala ruble 450 ngezinsuku zeviki futhi 600 ngezimpelasonto. amathikithi Okufanayo abadala - 700 kanye 900 ruble. Kuyaphawuleka ukuthi kuleli paki amanzi kukhona amanani esikhethekile amathikithi nomphakathi, kanye inkampani zabantu 10, kuhlanganise isikole uhambo nothisha.
Aqua Park Marino - i iholide ngiyilibale wonke umndeni. Lapho ungakhululeka umzimba nomphefumulo, hhayi kuphela ntambama. izinhlelo Dance enzelwe abantu abasha futhi siqhuba amaqembu umfundi.
Cyprus, Kykkos sezindela: incazelo, ukubuyekezwa, indawo kanye neminye imininingwane ewusizo
Moonshine-minispirtzavod Luxstahl. Uphenyo moonshine-minispirtzavode Luxstahl 14 l
Ukushisa ekhazimulayo phansi in indlu: design, ngebuhle nebubi